Xarakada Shabaab oo Gacanta kusoo dhigtay Saraakiil Itoobiyaan&Ciidamo daawo - iftineducation.com
aadan21 / March 11, 2012
iftineducation.com – Xoogaga Shabaab ayaa waxay habeen hore ay dagaalo culus ku qaadeen Deegaanka Yurkud oo u dhaxeeya Degmooyinka Luuq iyo Bardaale ee Gobolada Gedo iyo Baay, oo ay gacanta ku hayaan Ciidamadda Dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya.
Dagaalada qaraar ee ka dhacay Deegaanka Yurkud marka laga soo taggo khasaaraha ee ka dhashay, ayaa waxaa hadana jira maxaabiis lagu kala qabsaday dagaaladaasi, iyadoo laba askari laga qabtay Ciidamadda Dowladda Itoobiya.
Inkastoo Ciidamadda Itoobiya laba askari laga qabsaday ayaa waxaa hadana Xarakada Al Shabaab dagaaladaasi looga qabsaday dhawr ka mid ah ciidamadeeda, kuwaa oo qaarkood gacanta lagu dhigay iyagoo dagaalada ku dhaawacmay.
Labada askari ee laga qabsaday Ciidamadda Itoobiya ayaa waxaa lagu magacaabaa Tadhaase iyo Abarra, isla-markaana waxay si kooban ay ula hadleen Idaacada Andulus oo ku hadasha afka Xarakada Al Shabaab.
Tani ayaa waxay muujineysaa in Ciidamadda Itoobiya dagaaladaasi looga qabsaday laba askari, waxaana la-maqlaayay askartaasi oo leh waxaan codsaneynaa in nalaga badbaadiyo gacanta Al Shabaab.
Sh Roobow Abuu Mansuur: Magaalada Baydhabo deg deg ayaan kusoo celinaynaa (Dhagayso)